५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ राशिलाई जीवनभर कहिले मिल्न नसकेको सफलता - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ ०३, २०७६ समय: १३:४४:२८
अन्य .पाठेघर नै काटेर फाल्नु पर्दैन, यसरी सजिलै सँग सामाधान गर्न सकिन्छ ?तपाइ पनि एक शेयर गर्नुहोस ! बनेपाकी ३० वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) लगातार रक्तश्राव भएपछि चिकित्सककहाँ पुगिन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘पाठेघरमा मासु पलाएको छ, तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ एक सन्तानकी आमा शर्मिला चिकित्सकको कुरा सुनेर आत्तिइन्। उनले औषधि खाएर निको हुन्छ कि ? भनेर सोधिन् पनि। तर, चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले पाठेघरै फाल्नुपर्ने दोहो¥याए।
दोस्रो सन्तानको योजनामा रहेका शर्मिला र उनका पतिका ला गि सुखद् समाचार थिएन यो । उनको उमेर पनि त ३० वर्ष
मात्रै थियो। चिकित्सकले अप्रेशनबाहेक अर्को उपाय नभएको बताएपछि उनीहरुले अप्रेशनका लागि मिति समेत लिए।